Doorashadii Farmaajo lagu doortay waxay aheyd kala bixii xaqqa iyo baadilka - Caasimada Online
Home Maqaalo Doorashadii Farmaajo lagu doortay waxay aheyd kala bixii xaqqa iyo baadilka
Doorashadii Farmaajo lagu doortay waxay aheyd kala bixii xaqqa iyo baadilka
Maxaa hadda looga fadhiyaa dowladda cusub ee ka hana qaaday dalka inkastoo uu shacbiga Soomaaliyeed uu si diiran u soo dhaweeyay hoggaamiyaha cusub ee Soomaaliyeed, haddana weli far kama qodna xaaladdda dhabta ah ee Soomaaliyeed, ilaa intee Madaxweynaha hadda talada haya uu wax ka qaban karaa?
Hoggaamiyaha cusub ee Soomaaliya oo la doortay 8 Febraayo ee sannadkan, waxaa si diiran u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, arrintaasi waxay faxad gelisay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo niyad jab ba’an heystay.
Haddaba, Xilka uu qaaday mudane Maxamed Cabdullaahi waa mid aad u culus oo aan ku dhamaan karin si fudud.
Waxay soo ahaataba waxaa shacabka Soomaaaliyeed u caddaatay in mudane Farmaajo uu yahay hoggaaamiye dhab ah oo u hana qaaday dhammaan geeska Afrika.
Hoggaamiyaha nasiibka badan ee habeen dhaladka ah, waxuu dhashay waqti loo baahnaa, waxaa taa daliil cad u ah farxaddii oo ilaa iyo hadda aanan dhamaanin ee uu shacabka Soomaaliyeed weli la jalboonayo, kaddib markii ay qiyaaseen ishaarteenna hoggaamiye badbaadin karaa, kana badbaadin kara ammaan darrida caddaaklad darida iyo shaqo la’aanta dilootay.
Dabcan, mudane Farmaajo iskama imaanin, ilaah baa keenay macno la’aanna uma gelin tartanka ee waa ilhaamin xagga rabi nooga timid, wuxuuna muujiyay dadaalkiisa kama dambeysta ahaa, waxaana caddaatay in maalintaasi ahayd maalin ay kala baxeen xaqa iyo baadilka.
Ummadda Soomaaliyeed maxaa la gudboon: iyagoo in badan niyadda ku heysay in mar uun uu dhalan doono hoggaamiyihii ka saari lahaa dhibaatrooyinka iyo ammaan darrida dhinac walba kaga timid, taasi macnaheedu ma ahan in markiiba ay wax waliba toosayaan, sida cunugga marka uu dhasho aanan looga fileynin inuu horay ka socda, waa xaqiiqo dhab ah in dalkaan uu u dhashay hoggaamiyihii Alle u dooray waqtiigii loogu talagalay, hoggaamiyihii loogu talagalay in badan la sugayay.
Waa shaki la’aan in shacabka Soomaaliyeed, uu dhawaan ka bixi doono dhibaatooyinkii ku habsaday oo in dhawaalaba uu la kuf-kufayay in kastoo shacabka Soomaaliyeed ku dhisan yahay qabaail, uuna sabab u yahay waxa dib u dhac badan u keenay, waxaana laga sugayaa inuu ka baxo, aaminsannaanta qalafasan ee uu aaminay qabyaaladda, taasoo sababtay dib u dhac badan iyo is dil sabab u noqotay.
Shacabka Soomaaliyeed hadda maxuu sugayaa?
Tan waa kala bixii xaqa iyo baadilka hase ahaatee taariikhda ayaa waxay nagu xukumeysaa in aan runta isu sheegno, haddii aan dooneyno in geedi socodka nabadda la gaaro laguna dhaqmo waa in aan gacmaha isqabsannaa, dabcan Madaxweynaha qudhiisa waxaa u qorsheysan barnaamijyo badan uu dal iyo dibaddba uu dib ugu soo nooleynayo, waxaana u qorsheysan in uu muujiyo howl dhaxalgal u ahaan doono shacabka Soomaaliyeed, intaasoo keliya ma ahan, waxa aad ugu muhimsan wax qabadkiisu kuna billaabi doonaa ammaan darrada caddaaladda oo la sugo, wuxuuna uu ku dadaali doonaa sidii uu u suuro gelin lahaa degenaashaha shacbiga iyo sidii uu uga bixin lahaa abaaraha soo noq-noqday, kuwaasoo xitaa caalamka uu marar badan ka hadlay, waayo mar waxaan ka cabanaa abaaro, marna daadad xaaqa dadka iyo xoolaha.
Howlaha horyaallo, Madaxweynaha ma dhawa mana dheera, hase ahaatee kuwa u horreeya ee la doonayo inuu wax ka qabto inuu Ummadda ka dhiso xagga wacyiga iyo aqoonta iyo in shacabka Soomaaliyeed oo boqoljkiiba 80% uu manaafacsado nafaqada xoolaha ka timaada, waxayna ku nool yihiin deegaannada miyiga.
Hadda aan joogno imise abaar ayaa dhacday u dhimatay dad iyo xoolo ba? qeyla dhaanto weli waa taagan tahay, tillaabooyinka cadcad ee aan ku baarujineyno waxaa ka mid ah, mashaariicda xoolaha iyo degaannada ay ku nool yihiin, hadddii si dhab ah looga fikiro waxaa shaki la’aan horumari doona caafimaadkooda, waraabkooda iyo daaqoodaba. Waxaa kaloo fursado kuwaa ka sii weyn heli doonaa deegaannada gobollada dhexe iyo kuwa waqooyi, waxaa lagama maarmaan ahaan doonta ka fikirka waraabkooda iyo naaxin tooda, si loo helo xoolo tadyadooda tartan la gelin karo.
Waa dhab markaasi inay ku soo biiri doonaan dhallin yaro u soo hanaqaaday iyo aqoon yahanno wax weyn ku kordhiya horumarinta iyo daryeelka caafimaadka xoolaha aan isweydiinnee aaway Wakaaladdii daaqa Qaranka hadda suura gal ma tahay in wax laga qabto?
Waxay wakaaladdaasi lagama maarmaan u tahay dhamaan xoolaleyda Soomaaliyeed waa in ay dowladda ku baraarugtaa dhowrista ugaarta oo si baahsan loo dayacay, waxayna door ka qaadataa haddii la badbaadiyo horumarka dalxiiska, ama taasoo sannooyin horay u dayacnayd, iyadoo dalxiisku uu ku dhisan yahay waxaana la huridoonin mudane Madaxweyne inaad ka saarto sharuucda looga hortegayo leynta ugaarta oo laga dhigtay mashruuc aan loo baahneyn.
Sidaa darteed, Madaxweyne Farmaajo waa Madaxweynaha JFS, waxaan ku tilmaami karnaa halyeey mudnaan gaaray una dhow in uu badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed oo sannooyin badan soo dhaxdabaalanayay marka laga soo billaabo 1991.
W/Q: Ciise Faarax.